ओलीको करिस्मा: भय साँचो हो भने सरकारको आयु पनि छोटिदै जानेछ ! | सिमान्तMarginal ओलीको करिस्मा: भय साँचो हो भने सरकारको आयु पनि छोटिदै जानेछ ! – सिमान्तMarginal
नेपाली कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अवसान संगै राजनीतिको मियो गुमाए पछि त्यो भूमिकामा यतिखेर केपी ओली बिस्तारै उक्लदै गरेको देखिएको छ। धेरै प्रतिस्पर्धाका बिचमा आफ्नो दलको अध्यक्ष चुनिए, प्रधानमन्त्रि भए, भारतले लगाएको नाकावन्दीका वेला जनताको सहानुभूति लिन सफल देखिए, वाम एकता र स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म बाम उम्मेद्वारलाइ नेतृत्व दिएर जिताउन सफल भए; आफु बहुमतको प्रधानमन्त्रि र माओवादी केन्द्र पार्टि र त्यसका नेता प्रचण्डलाइ नि:सर्त एमालेमा बिलय गराउन सफल पनि भए। आन्तरिक रुपमा उनी सफल त देखिए नै बाह्य रुपमा पनि चीनको आशिर्वादमा उनको तरक्की भएको भनेर बुझ्नेहरुलाई भारतका प्रधानमन्त्रिको नेपाल भ्रमण गराएर त्यो हौवा मत्थर गराउन पनि सफलै देखिए । यसरि अहिलेको नेपाली राजनीतिको मियोको रुपमा प्रधानमन्त्री के पी वली स्थापित हुन् सकेको देखिएको छ, हालाँकि यो सफलता कृतिमा हो वा स्थायी हो भन्ने वारेमा उनले लिने नीति र विकासका कार्यक्रमहरुले तय गर्ने छ ।
प्रारम्भमा ओली आँफैले चीनसंग गरेका राम्रा सन्धि सम्झौताहरुको नाम उच्चारण गर्न पनि डराएको देखिएको छ । यदि उनमा देखिएको यो भय साँचो हो भने यहि भयले ओलीको आयु नाप्ने छ ।
देश चरम गरिविमा छ । भ्रष्टाचार त्यस्तै चरम छ । किसानहरु मर्कामा छन् । गरिवका छोराछोरीले बिदेशमा रगत पशिना बगाएर आएको रेमिट्यान्सबाट धेरैले सुख सयल मारेका छन् तर त्यसरी कमाएर ल्याउनेहरुको हित र सुरक्षा शून्य छ । बैदेशिक नीति लथालिङ्ग छ । बिदेशीहरु खेल्नुसम्म खेलेका छन – नेपाल र नेपालीको अहितै हुने गरि ?! यी सबै समस्याको साँगोपाँगो लगाउनु पर्नेछ ।
चीनसंग गरिएका कतिपय राम्रा सन्धि सम्झौता लागु गराउन भारत र पश्चिमा शक्तिहरु वाधक देखिएका छन् । यसमा सबैको आ- आफ्नै स्वार्थ लुकेको छ । त्यसलाई वलीले कसरि ट्याक्कल गर्लान हेर्न बाँकि छ । उनलाई काम गर्न धेरै सजिलो किन देखिएको छ भने प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस धेरै नै कमजोर देखिएको छ। उसलाई यतिखेर सरकारको प्रतिपक्षी हुनेभन्दा पनि आफ्नै संगठन सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । प्रारम्भमा ओली आँफैले चीनसंग गरेका राम्रा सन्धि सम्झौताहरुको नाम उच्चारण गर्न पनि डराएको देखिएको छ । यदि उनमा देखिएको यो भय साँचो हो भने यहि भयले ओलीको आयु नाप्ने छ । जो भए पनि मुलुकले खोजेको असल नेतृत्व र विकास नै हो, त्यसको परिपूर्ति हुन सकोस; शुभकामना !
Previous Postबझाङी राजा देवीजंग सिंहसम्म: पिताजीको पाइला पच्छ्याउँदैNext Postछातीमा तक्मा | कविता